304 Stainless Steel Stockpot
Vietnam နိုင်ငံမှ ထုတ် 304 အရည်အသွေးမြင့် စတီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စတီးအိုးလေး ဖြစ်ပါတယ်။စတီးက အပူကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အတွက် အစားအစာထဲမှ အာဟာရနှင့် အရသာပိုရှိအောင် လှုံဆော်ပေးပါတယ်။organic Coating ဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးအိုးကို အသစ်လဲရန် လွှင့်ပစ်ပါကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး။ ဖန်အဖုံးအကြည်လေးလည်း ပါရှိပါတယ်။..
Bobo;s Mini Non-stik Set
Healthy and Environment Friendly: No PFOA, No LEAD, No CADMIUMDurasafe Technology from SEB GROUPE France,anon stick coating that lasts 3x times longer.Strong and Durable and doesn’t chip easilyNew special Fixing Technology, strong and durable non-stick coatingHigh quality 3003 Aluminium Material ensures fast and super efficient even heatingStrong..
Comfort Non-stick Fry Pan
20cmUse for frying food. Need to use soft material to clean...
Crystal Soft Anodized 6Pcs Sets
Vietnam နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး နို့ကျိုလို့ရတဲ့ pan။အလူမီနီယံကို အပေါ်ယံ လောင်းထားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ(DURASURFACE )နည်းပညာနဲ့ သတ္တု နှစ်လွှာရဲ့အထဲမှာ အလူမီနီယံကို ထည့်ထားခြင်းကြောင့် အလယ်တစ်နေရာတည်း ပူနေခြင်းမျိုး မဖြစ်ပါ။အိုးအထူမှာ 2.5mm ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားမှာ 16cm ဖြစ်ပါတယ်။အိုးကိုအသစ်လဲရန် လွှင့်ပစ်ပါကလည်း ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက..
Ever Hard anoidzed Non-Stick Frypan (22cm)
Frypan 22 CMHard Anodized Non-stickNon-stick coating of GROUPE SEB is easy to clean and safe for your health and the enviromentFast and even heating for efficient cooking due to usage of high quality 3003 aluminium..
Ever Hard anoidzed stockpot
Vietnam နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး နို့ကျိုလို့ရတဲ့ pan။အလူမီနီယံကို အပေါ်ယံ လောင်းထားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ(DURASURFACE )နည်းပညာနဲ့ သတ္တု နှစ်လွှာရဲ့အထဲမှာ အလူမီနီယံကို ထည့်ထားခြင်းကြောင့် အလယ်တစ်နေရာတည်း ပူနေခြင်းမျိုး မဖြစ်ပါ။အိုးအထူမှာ 2.5mm ဖြစ်ပါတယ်။..
Fruits Non-Stick Stockpot 24cm
Vietnam နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်လှတဲ့ အိုး လေးပါ။ (သတ္တု + အလူမီနီယံ + သတ္တု ) ဆိုပြီး (၃)လွှာ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အလူမီနီယံကို အပေါ်ယံ လောင်းထားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ (DURASURFACE )နည်းပညာနဲ့ သတ္တု နှစ်လွှာရဲ့အထဲမှာ အလူမီနီယံကို ထည့်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလူမီနိယံကြောင့် အပူချိန်က အိုးမှာ သမမျှတပါတယ်။ အလယ်တစ်နေရာတည်း ပူနေခြင်းမျိုး မဖြစ်ပါ။O..
Fruits Non-Stick Stockpot 20cm
Vietnam နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီးအလူမီနီယံကို အပေါ်ယံ လောင်းထားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ(DURASURFACE )နည်းပညာနဲ့ သတ္တု နှစ်လွှာရဲ့အထဲမှာ အလူမီနီယံကို ထည့်ထားခြင်းကြောင့် အလယ်တစ်နေရာတည်း ပူနေခြင်းမျိုး မဖြစ်ပါ။အိုးအထူမှာ 2.5mm ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားမှာ 16cm ဖြစ်ပါတယ်။အိုးကိုအသစ်လဲရန် လွှင့်ပစ်ပါကလည်း ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှု မရှိပါ။ ဖန်အဖုံး..
Vietnam နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး နို့ကျိုလို့ရတဲ့ pan။အလူမီနီယံကို အပေါ်ယံ လောင်းထားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ(DURASURFACE )နည်းပညာနဲ့ သတ္တု နှစ်လွှာရဲ့အထဲမှာ အလူမီနီယံကို ထည့်ထားခြင်းကြောင့် အလယ်တစ်နေရာတည်း ပူနေခြင်းမျိုး မဖြစ်ပါ။အိုးအထူမှာ 2.5mm ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားမှာ 16cm ဖြစ်ပါတယ်။အိုးကိုအသစ်လဲရန် လွှင့်ပစ်ပါကလည်း ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မ..